ယွန်း: HAPPY BIRTHDAY (July 20)
ဒါကသူ့ အတွက် မွေးနေ့ ကိတ်.. (ယွန်းကိုယ်တိုင် ပင်ပင်ပမ်းပမ်း လုပ်..အဲလေ ..ရှာထားတာ)
ဒါက သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ဆူရှီ...
ဒါက ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေအတွက် ...အ၀သုံးဆောင်သွားကြပါရှင်...
ဒီမှာ ၀ိုင်ကြိုက်သူတွေ အတွက်ဝိုင် ... ၀ိုင်မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သစ်သီးဖျော်ရည်...
ဒါကတော့ အချိုပွဲ ရေခဲမုန့် ....
သူ့ အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်း
ဒီနေ့ဂျုလိုင် ၂၀ မှာ ကျရောက်တဲ့ သူ့ ရဲ့မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်
မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြစ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါသည်။
မွေးနေ့ ပွဲလေးကိုကြွရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဂျုလိုင် ၂၀ ၊၂၀၁၀
စာရေးသူ ယွန်း မှ 11:17 AM
Happy Birthday! မယွန်းရဲ့ လူကြီးရေ.. ဟီးဟီး.. ဘယ်လိုပြောရမယ်မသိလို့.. ဘာလဲ ဆူရှီပုံတွေဆိုတော့ ဆူရှီကြိုက်တယ်ပေါ့...း)))
အိမ်ကလူကြီးရေ.... ဟတ်ပီးဘသ်ဒေးပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
အကျွေးအမွေးနဲ့ဧည့်ခံတဲ့ ယွန်းကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါရှိပါတယ်။
ယွန်းရဲ့ လူကြီးကတော့ ကံကောင်းပြီကွာ..
ဒီလောက်အချက်အပြုတ်တော် အဲ အရှာအဖွေတော်..။ အကျွေးအမွေးကောင်းတာဆိုတော့.. နော်း)))
မွေးနေ့ရှင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ.. ယွန်းလည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
အိမ်ကလူကြီး ကိုလဲ ပွဲထုတ်ပြပါဦး
အစစအဆင်ပြေ၊ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘ၀လေးကိုရာသက်ပန်ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့........။
(အစားတွေတော့ မစားသွားဘူး....။ ၀ိုင်ပုလင်းတော့ ယူသွားတယ်.....။ နေကောင်းမှသောက်ဖို့......း)
အိမ်က လူကြီး ကို ဆုတောင်း ပေးလိုက်တယ်နော် happy birthday ပါ
နောက်ပြီး ညီမ က အချက်အပြုတ် အဲ အရှာအဖွေ တော်လိုက်တာ စားရက်စရာ မရှိဘူး ဒါကြောင့် မစားတော့ ဘူးနော်
ကြည့်ခွင့်ရတာနဲ့ကို ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ လှလိုက်တာ
လည်လည်ရောက်လို ပြန်လည်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ အရင်ဆုံး ပထမဆုံးပို့စ်ကိုဖတ်တယ်။ မွေးနေ့စားစရာဓါတ်ပုံတွေ။ပြီးတော့ အသက်အရွယ်ကြည့်တယ်။ အကိုလား အစ်မလားဆိုတာ သိထားသင့်တယ်လေ။ပြီးတော့ ဘလော့စာရင်းကို ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော့်ပါတာပဲ။ ကျန်တာတွေသဘောမကျပါဘူး။ အခုလိုလင့်ချိတ်ပေးပြီး အသိအမှတ်ပြုပေးတာ ၀မ်းသာဆုံးပဲလို့ အမှန်တိုင်းဝန်ခံပါတယ်အစ်မရယ်။ ကျွန်တော်အမြဲလာလည်ပါမယ်။ ကျွန်တော်ဆီလဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စာဖက်သူနည်းတာဗျာ ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ။ ကျွန်တော်လဲ ဘာတွေရေးမှန်းမသိဘူး။ ဒီကအစ်မကြီးဆီ အရင်ဆုံးရောက်လို့ စိတ်ထဲရှိတာ လုပ်မိတာအရင်ပြောသွားပါတယ်။
ပို့စ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောပါမယ်။ အစ်မရဲ့ လူကြီးအတွက် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ ပြီးပြည့်စုံသော မိသားစုနဲ့အတူတကွ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ မုန့်တွေကတော့ ကော်ပီပတ်စ်လုပ်ရတာ အတ်ာပင်ပန်းမှာပဲ။ :D တ၀ကြီး အိပ်ထဲထည့်သယ်သွားတယ်အစ်မရေ။ ပျော်ရွင်သာယာနိုင်ပါစေဗျာ။
ဂျင်းနောက်ကျသွားတယ်။ ယွန်းရဲ့ အိမ်ကလူကြီးကို ဟက်ပီးဘာဒ်ဒေးပါလို့နော်...။ ယွန်းတို့မိသားစုလေးထာဝရ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေ....။
လက်ကျန်မုန့်လေးတွေ ရှင်းသွားတယ်နော် :))
အိမ်က လူကြီးရဲ့ ဤယနေ့မွေးနေ့မှသည် စိတ်၏ချမ်း သာခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများဖြင့် အာနာဂတ် ခရီးကို ဆက်လက် ချီတက်နိုင်ပါစေဗျာ ...... ကျွေးမွေးထားတဲ့ အထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးက ပုလင်းလေး တွေပဲဗျာ ... ကျေးဇူးပါ ....
Happy Birthday ပါ အိမ်ကလူကြီးရေ... (အဲ ယောင်သွား
လို့) ယွန်း ရဲ့ ချစ်ချစ်ကြီးရေ....
စကားမစပ်..ဝိုင် တလုံး လုံး အကုန်သောက်သွားပြီ..း)
မယွန်းရေ အလည်လာသွားတာ ကျေးဇူးပါနော် ပြန်အလည် လာခဲ့ပါတယ် ... စီပုံး မရှိလို့ အခုလို ကွန့်မန့်မှာ ရေးသွားတာပါ .. လင့်ခ်လေး ယူသွားတယ် နော် ... ကျနော်က ယူတီကာက ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ် .. မယွန်းကကော ဘယ်မြို့ကလဲ ....
happy birthday ပါလို့ ကျနော်အတွက် ပြောပေးပါဦးနော် ။ မုန့်တွေတဝကြီး စားသွားပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါ၏ . နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မခွဲမခွာ ပျော်ရွှင်သော စုံတွဲလေးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်နော်... :)
ညီမယွန်းလေးရေ ခုမှ ထမင်းစားပြီးလို့ မုန့်တွေကို အိနြေ္ဒရရ ကြည့်သွားတယ်...
ဟက်ပီးဘာဒ့်ဒေးပါလို့ ယွန်းရဲ့ လူကြီးကို ပြောလိုက်ပါနော်....:)
နောက်ကျပြီးမှ ဆုတောင်းပေးရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်..
မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ
နားလည်မှုခိုင်မာသော ချစ်ခြင်းများဖြင့် ရာသက်ပန် တည်မြဲသော အိမ်ထောင်ဖြစ်ပါစေနော်..